Description Triple Gold Rich Cream – Russian Chaga Cosmetic | 러시안 차가 화장품
Description Triple Gold Rich Cream
အာဟာရဓာတ် ဖြည့်စည်းပေးခြင်း + အသားအရေ ကာကွယ်ပေးခြင်း
anti – aging & brightening & lifting
သဘာ၀ပစ္စည်းများဖြင့် အဖိုးတန်သော သင်၏ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်း ပေးပါ။
ဗီတာမင်များဖြင့် အသားအရေ အာဟာရ ဖြည့်စည်းပေးခြင်း!
ဗီတာမင် A, B, C, D, E တို့ဖြင့် အသားအရေ အာဟာရ ဖြည့်စည်းပေးပါ။
အစိုဓာတ် စုဆောင်းခြင်း အာဏိသင်!
Antibacterial ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အသားအရေကို နူးညံ့ စိုပြေစေပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်စေပါသည်။
အစိုဓာတ် ပြည့်ဝသော အသားအရေ!
Polymer Network ဖြင့် အရေပြားဆဲလ်များကို ထိရောက်စွာ အစိုဓာတ် ဖြည့်စည်း‌ပေး၍ အစိုဓာတ် စုဆောင်းခြင်း စနစ်ကို ဖန်တီးပေးခြင်း Network အတွင်း ထည့်ထားသော အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်စည်း‌ပေး၍ အစိုဓာတ် ထိန်းထားနိုင်မှုလည်း UP!
200 ~ 300nm ၏ အလွန်အစွမ်းထက်သော nanoemulsion ဖြင့် အရေပြားထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် အခြေခံကျသော ပြောင်းလဲခြင်း
Nano-vitamin capsules ဖွံ့ဖြိုးမှု
သဘာဝ အရောင်အသွေးနှင့် နူးညံ့မှု
Lacithin encapsulation technology ဖြင့် အရေပြားပေါ်တွင် ညီမျှစွာ စိမ့်ဝင်မှု
All in Anti-wrinkle & Brightening
Anti-wrinkle + Brightening နှစ်ဆ အာဏိသင် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ပစ္စည်း
Capsule များအား ‌ဖောက်ပစ်၍ အသားအရေ‌ပေါ်တွင် ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပြီး ဖြန့်လိမ်းပေးပါ။
golden capsule များ ပါဝင်သည့် Moisturizing Cream သည် အသားအရေကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေး၍ အာဟာရဖြည့်တင်းပေး ပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်စေသည့် အပြင် အသားအရေအား တောက်ပစေပြီး အိုမင်းခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည့် အာဏိသင် ရှိပါသည်။
အသားအရေ အမျိုးအစား အားလုံးအတွက်
Anti-wrinkle + Brightening နှစ်ဆ အာဏိသင် ပစ္စည်း
Description Triple Gold Capsule Essence
Description Triple Serum Fluid
Description Triple Eye Countour Gel Cream